Xiddiga reer Argentina ee Lionel Messi ayaa laabta u qaboojiyey taageerayaasha kooxda Barcelona, kahor kulanka Real Mallorca ay kula ciyaarayaan Sabtida horyaalka La Liga, maadaama la ogolaaday in dib loo ciyaaro horyaalka. Sida laga soo…
Tababaraha kooxda Barcelona ee Quique Setien ayaa muujiyay inuusan ka walwalsanayn xaaladda weeraryahankiisa Lionel Messi. Kabtanka Barcelona ayaa muddooyinkii dambe si gaar ah u sameynayay tababarka, iyadoo lagu soo warramayay inuu jiro…
Xiddiga qadka dhexe kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Holland ee Frenkie de Jong ayaa ka warbixiyay doorka uu ku leeyahay saaxiibkiis Lionel Messi horumarkiisa xilligan. Frenkie de Jong ayaa kaga soo biiray Barcelona kooxda reer Holland…
Tababaraha reer Spain iyo kooxda Barcelona ee Quique Setién ayaa ka warbixiyay xaalada soo kabasho ee Luis Suarez, kaddib dhaawacii uu qabay in mudo ah. Luis Suarez ayaa helay ogolaansho caafimaad si uu uga qeyb galo kulamada kooxdiisa…